History of our Kingswood building | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« APPLICATION OF ISLAMIC LAW IN MYANMAR by Marlar Than Aung
.မြန်မာမွတ်စလင်တွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ..စိတ်အားငယ်နေစရာ…မလိုပါဘူး…. »
History of our Kingswood building
[ 10-January -2014 ]
ကလော စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းသည် ကလောမြို့၊ အနောက်ဗိုလ်ကုန်းရပ်ကွက်အတွင်း၌ တည်ရှိပါသည်။ ကျောင်းကြီး၏ စာသင်ဆောင်ပုံသဏ္ဌာန်မှာ အင်းစိန်စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းမှ သုံးထပ်မှန်ဆောင်နှင့် တစ်ထပ်တည်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကျောင်းဆောင်ကို ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။
အကျယ်အ၀န်း ၆၀ ဒသမ ၈၃ ဧကပေါ်တွင်တည်ရှိသည့် ယင်းကျောင်းကြီးမှာ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းများအနက် ထူးခြားသောကျောင်းတစ်ကျောင်းဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဓာတ်သတ္တုတူးဖော်ရေး (Mining Engineering) ဘာသာရပ်မှာ ကလောစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းတစ်ကျောင်း၌သာ ရှိသောကြောင့်ဖြစ်၏။
ကျောင်းစာသင်ဆောင် အဆောက်အဦမှာ ယခင်က Staff College နေရာဖြစ်သည်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ဂျီတီအိုင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက် Staff College အား ဗထူးမြို့သို့ပြောင်းပေးခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် ကျောင်းအဆောက်အဦကိုလည်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။ ကျောင်းဖွင့်လှစ်စဉ်က အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ပင်မစာသင်ဆောင်နှင့် ကနောင်ဆောင်၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ မှိုင်းလုံးဆောင်နှင့် အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ သဇင်ဆောင်တို့ အပါအ၀င် ဧက ၆၀ ကျော် ရှိခဲ့ပါသည်။
ကလောစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းတွင် ကျောင်းသားများအတွက် အိပ်ဆောင်နှစ်ဆောင်နှင့် ကျောင်းသူများအတွက် အိပ်ဆောင်တစ်ဆောင်တည်ရှိပါသည်။ ကျောင်းသားအိပ်ဆောင်နှစ်ဆောင်မှာ ကနောင်ဆောင်နှင့် မှိုင်းလုံးဆောင်တို့ ဖြစ်ကြပြီး ကျောင်းသူများအတွက်မူ သဇင်ဆောင်ကိုထားရှိပါသည်။
ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအား အဆောင်နေထိုင်ခွင့် သတ်မှတ်ရာတွင် ကလောမြို့ကျောင်းတော်ကြီး တည်ရှိရာနေရာနှင့် ဝေးကွာသောအရပ်ဒေသများတွင် နေထိုင်သူများသာ ဖြစ်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကလောမြို့ပတ်လည် မိုင် ၅၀ အကွာ စက်ဝိုင်းဒေသအတွင်းရှိ ရွှေညောင်၊ တောင်ကြီး၊ ဟဲဟိုး၊ အောင်ပန်း၊ သာစည်၊ မိတ္ထီလာ၊ သဲတော၊ ၀မ်းတွင်း၊ မြစ်သား၊ မလှိုင်၊ ပျော်ဘွယ်၊ ရမည်းသင်း၊ တပ်ကုန်း၊ ပျဉ်းမနား စသောမြို့များ၌ နေထိုင်ကြသူ ကျောင်းသားများမှာ အဆောင်နေခွင့်မရကြပေ။ ထိုသူများသည် ပြင်ပ ပုဂ္ဂလိကဆောင်များ၌သာ ငှားရမ်းနေထိုင်ကြရ၏။
ကျောင်းသားဆောင်နှစ်ဆောင်အနက် ကနောင်ဆောင်သည် ကျောင်းစာသင်ခန်းနှင့် အဝေးဆုံးဖြစ်ပြီး မြိုကွက်နှင့် အနီးဆုံးနေရာ၌ တည်ရှိပါသည်။ တောင်ကုန်းထက်၌တည်ရှိသည့် အနီရောင် အုတ်တိုက်နှစ်ဆောင်တွဲကြီးဖြစ်၏။ ယင်းအဆောက်အဦသည် ကိုလိုနီခေတ်က ကင်းစ်ဝုဒ် အမျိုးသမီးကျောင်းဆောင်အဖြစ် ထင်ရှားခဲ့ပါသည်။
ပျဉ်ကာ နှစ်ခန်းတွဲ ခြောက်ခန်းပါရှိသောအဆောင်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းနှင့်နီးကပ်စွာတည်ရှိသည်။ အဆောင်ထမင်းစားခန်းနှင့် ကပ်လျက်အခြမ်းအား မှန်ကာရံထားပြီး နောင်တွင် ရုပ်မြင်သံကြားစက်ကို ထားရှိပေးပါသည်။
အမျိုးသမီးများ အတွက် သဇင်ဆောင်မှာမူ ကျောင်းအရှေ့ဘက် နှစ်ဖာလုံခန့်အကွာ၌တည်ရှိသည်။ သဇင်ဆောင်ကို ဂျပန်ခေတ်က ကင်ပေတိုင်စခန်းဟူ၍လည်း ပြောဆိုကြသည်။
ကျောင်းသားဆောင်များမှာ ကျောင်းပိတ်ရက်များတွင် စစ်ဦးစီးတက္ကသိုလ်သင်တန်းသား အရာရှိများ၊ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် မြို့ပြမြေတိုင်း လက်တွေ့ကျောင်းသားများ၊ လူငယ်ကျောင်းသားများ တည်းခိုရာ အဆောင်ဖြစ်သွားပါသည်။
G.T.I,Kalaw&Ayetharyar added3new photos.
[ 21-January-2014 ]
သမိုင်းမှတ်တမ်း (၁၂) (၁၃) (၁၄)
၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ကလောဂျီတီအိုင်ကျောင်း နောက်ဆုံးသုတ်ဆင်းသွားပြီးနောက် နိုင်ငံရေးအခြေအနေ ရှုပ်ထွေးလာမှုကြောင့် ကျောင်းပိတ်လိုက်ရပါသည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ အစိုးရလက်ထက် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်သော စစ်ဦးစီးတက္ကသိုလ်သို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်ရ၏။ ဤသို့ဖြင့် တောင်ကြီးမြို့နယ် အေးသာယာကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ကြရသည်။
၁၉၆၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၁ ခုနှစ်အထိ ကလောဂျီတီအိုင်မှ ဆင်းခဲ့ကြသူ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား အရေအတွက်မှာ ၂၁၁၃ ဦး ရှိခဲ့၏။
ကလောဂျီတီအိုင် အာစရိယပူဇော်ပွဲကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် စတင်ကျင်းပပါသည်။ ယင်းအာစရိယပူဇော်ပွဲတွင် ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ ဂျီတီအိုင်ကျောင်း စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်အထိ ကလောဂျီတီအိုင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော ဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးများအား ပူဇော်ကန်တော့ကြ၏။
နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော အာစရိယပူဇော်ပွဲကို စဉ်ဆက်မပြတ် ကျင်းပလာခဲ့ရာ ယခုအခါ ၁၇ ကြိမ်မြောက်ပင် တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ၁၆-၁၀-၂၀၀၅ တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အာစရိယပူဇော်ပွဲမှတ်တမ်းအရ ဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်း ၁၀၄ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ယင်းစာရင်းအရ ဆရာဦးလှမြင့်(ကထိက)၊ ဆရာဦးချစ်ခိုင်(လက်ထောက်ကထိက)၊ ဆရာဦးညွန့်တင်(နည်းပြ)၊ ဆရာဦးကျော်မင်း(နည်းပြ)၊ ဆရာဦးသိန်းဇော်(မြို့ပြ)၊ ဆရာမဒေါ်မြသန်းချစ်(လက်ထောက်ကထိက)၊ ဆရာဦးသန်းဦး(လက်ထောက်ကထိက)၊ ဆရာဦးမြင့်မောင်(နည်းပြ)၊ ဆရာဦးထွန်းခင်(နည်းပြ)တို့မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရ၏။
တောင်ကြီးမြို့ အေးသာယာစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ပါသည်။ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးအဖြစ် စတင်တာဝန်ယူရသူမှာ ဆရာကြီးဦးအောင်နိုင်ဖြစ်၏။
ဆရာကြီးဦးအောင်နိုင်သည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အေးသာယာဂျီတီအိုင်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကြီးဦးအောင်နိုင်သည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် ဆရာကြီးဦးအောင်ရွှေက ဆက်ခံခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ အင်းစိန်ဂျီတီအိုင် ရာပြည့်ပွဲကျင်းပချိန်တွင် ဆရာကြီးဦးအောင်ရွှေ တာဝန်ယူဆဲဖြစ်ပါသည်။
( ကလော/အေးသာယာ ကျောင်းသမိုင်းမှတ်တမ်း ပြီးပါပြီ – Admin ep )
This entry was posted on April 3, 2015 at 8:44 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.